Airlinesgbọ elu Spirit na-eweta ụzọ ọhụụ mba ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Intercontinental nke Houston
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Airlinesgbọ elu Spirit na-eweta ụzọ ọhụụ mba ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Intercontinental nke Houston
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Guatemala • Akụkọ gbasara Honduras • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ọmarịcha ịma mma na ọdịbendị dịgasị iche iche nke Latin America na-echere ka Mmụọ Nsọ na-aga n'ihu na mgbasawanye mba ụwa, oge a site na Houston! Malite na Septemba 6, 2018, Mmụọ ga-ebido ọrụ site na Houston George George Intercontinental Airport (IAH) ruo San Salvador, El Salvador na ọrụ afọ niile na-agba ugboro atọ kwa izu na Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport (SAL). N'echi, na Septemba 7, Mmụọ Nsọ ga-amalite ụgbọ elu na-enweghị nkwụsị n'etiti Houston na Guatemala City, Guatemala na ọrụ afọ niile ga-emecha rụọ ọrụ ugboro anọ kwa izu na La Aurora International Airport (GUA). Ihe mgbakwunye na-enye ọnụ ala ọnụ maka njem mba ụwa iji hụ ndị enyi, ezinụlọ, ma ọ bụ naanị maka ọ funụ!
Zọ ndị ọhụrụ ga-agbakwunye ọrụ mba niile nke Mmụọ dị n'etiti Houston na Cancun na San Jose del Cabo, Mexico, yana San Pedro Sula, Honduras. A na-edozi ụzọ ndị ahụ iji wusie netwọkụ na-eto eto ike mgbe ị na-achọ mkpa njem dị iche iche nke Houston. Nkwuputa a na-abịa naanị izu ole na ole Mmụọ kwuchara na ọ na-amalite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ iri na abụọ si Orlando, Florida ruo Latin America na Caribbean.
"Mgbakwunye nke San Salvador na Guatemala City na ndepụta anyị na Houston ga-enye ndị ọbịa anyị nhọrọ ndị ọzọ iji gaa leta ndị anyị hụrụ n'anya ma nwee ahụmịhe niile mpaghara ndị a dị ịtụnanya ga-enye," ka Mark Kopczak, Onye isi oche nke Mmụọ Nsọ nke Network Network kwuru. Mmụọ gara n'ihu igosipụta onwe ya dị ka onye isi na njem na Latin America na Caribbean site na ịnye ego ụgbọ ala dị ala na-enye ohere ka ndị ọzọ rite uru na ọrụ anyị a pụrụ ịtụkwasị obi.
Houston Bush (IAH) ruo / site na Malite: Frequency:
San Salvador, El Salvador (SAL) * Septemba 6 3x kwa izu, afọ
Guatemala City, Guatemala (GUA) * Septemba 7 3x kwa izu, afọ
4x kwa izu, kwa afọ mgbe 11/8/18 gasịrị
San Jose del Cabo, Mexico (SJD) Ọrụ dị 4x kwa izu, oge
Cancun, Mexico (CUN) Ọrụ 3x dị ugbu a kwa izu, afọ
Kwa ụbọchị n'oge ọkọchị
San Pedro Sula, Honduras (SAP) Ọrụ dị 4x kwa izu, afọ